Ọdịiche dị n'etiti SEO na SEM, Usoro abụọ iji weghara okporo ụzọ na weebụsaịtị gị | Martech Zone
You ma ọdịiche dị n'etiti SEO (Search Engine Optimization) na SEM (Search Engine Marketing)? Ha bụ akụkụ abụọ nke otu mkpụrụ ego. A na-eji usoro abụọ ahụ eme ihe iji jide okporo ụzọ na weebụsaịtị. Ma otu onye n'ime ha ka dị ngwa ngwa, maka obere oge. Nke ọzọ bụ ego dị ogologo oge.
Gu maralarịị onye n’ime ha kacha mma maka gị? Ọfọn, ọ bụrụ na ịmaghị, lee, anyị ga-akọwara gị ya. SEO na-emekọ ihe ọnụ; ndị na-anọ n'ọnọdụ kachasị elu nke nsonaazụ ọchụchọ Google. Na SEM bụ nsonaazụ ndị ahụ site na mbido nkewapụtara dịka mgbasa ozi.
Na mkpokọta, a na-arụ ọrụ mgbasa ozi mgbe ọchụchọ ahụ na-egosi ịzụrụ ụma, ma ọ bụ chọọ ozi gbasara ngwaahịa. A na-ahụkwa ha site na nsonaazụ sitere na mkpụrụ osisi n'ihi na ejiri obere akara nke ejiri: "Ad" ma ọ bụ "Sponsored" mata ha. Nke a bụ nke mbụ dị iche na SEO na SEM bụ etu nsonaazụ si apụta na nchọta.
SEO: Atụmatụ Ogologo Oge
Ọnọdụ SEO bụ usoro niile eji eme ka ibe weebụ nyocha Google. Lelee nkwa ndị ahụ niile na-agwa gị na SEO dị mfe na ihe ndị dị otú ahụ. Ya mere, nnukwu ọdịiche dị n'etiti SEO na SEM bụ oge ya iji nweta nsonaazụ.
SEO bu uzo di ogologo. Kwado nsonaazụ na ibe mbụ nke Google dabere n'ọtụtụ ihe (ọtụtụ narị ihe nwere ike ime).
Isi ihe dị na mmalite bụ iji usoro a na-akpọ "ogologo ọdụ." Jiri mkpirisi okwu gbatịrị agbatị, jiri ọchụchọ ole na ole mana obere asọmpi.
SEM: Maka obere oge na mmezi
A na-eji SEM mee ihe maka ebumnuche abụọ:
Iji weghara nleta na weebụsaịtị site na mmalite nke ọrụ, mgbe anyị na-apụtabeghị n'ọnọdụ ọnọdụ.
Iji ohere ọ bụla mee ihe, nihi na ọ bụrụ na anyị ejighị ya, asọmpi a ga-eme ya.
Nsonaazụ ndị Google ga-egosi maka "akpụkpọ ụkwụ egwuregwu" ga-adị iche na "Nike akpụkpọ ụkwụ nke abụọ na LA" A ga-enwe mmadụ ole na ole na-achọ nke ikpeazụ, mana ebumnuche ha bụ nke a kapịrị ọnụ.
Nke a bụ ihe kpatara eji eji usoro a nke ibipụta mgbasa ozi na engines ọchụchọ, ọkachasị mgbasa ozi Adwords, ma n'oge dị mkpirikpi iji malite ịnweta ndị ọrụ na-eleta weebụsaịtị, na ogologo oge iji gaa n'ihu na-ejigide òkè ahịa na nke a nke mgbasa ozi.
Enwere ọchụchọ nke ọ dị mgbagwoju anya ịpụta na peeji mbụ nke nsonaazụ. Were ya na ị na-ere akpụkpọ ụkwụ egwuregwu. Igosi na ibe mbu maka nyocha "zụrụ ndị sneakers" ga-abụ ezigbo marathon na ogologo oge. Nke ahụ bụ ọ bụrụ na ị ga-erute ebe ahụ.
Ga-asọ mpi ọzọ na-erughị megide ezigbo Refeyim dị ka Amazon. Enweghị ihe ọ bụla, cheedị ihe ọ ga - abụ ịlụ ọgụ megide ndị dike a. N’ezie, igbu oge na ihe onwunwe.
Ọ bụ ya mere mgbasa ozi ma ọ bụrụ na emee ka ọ pụta ìhè, nye anyị ohere ịsọ mpi megide ndị dike a ma nwee ohere ịpụta na nyocha ndị ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume.
Esemokwu dị n’etiti SEO na SEM
Ka anyị lee ọdịiche kachasị pụta ìhè n'etiti otu usoro na ọzọ.
Oge - Ekwuru na SEM dị mkpụmkpụ, SEO dịkwa ogologo. Agbanyeghị, dị ka ị hụlarị, enwere mpaghara ebe SEM dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọghị ida ohere ọ bụla iji dọta ndị ahịa. Site na mgbe anyị ahazi mkpọsa anyị na "anyị na-enye bọtịnụ ahụ," anyị ga-amalite ịpụta na ọchụchọ nke otu narị otu narị ma ọ bụ puku ndị ọrụ (nke ọma, ego ahụ dabererịrị na mmefu ego gị). Agbanyeghị, iji pụta na nsonaazụ organic, ọ dị mkpa ọrụ maka ọtụtụ ọnwa, ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ afọ, iji nweta ọnọdụ obere obere. N'ezie, ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ dị ọhụrụ, a na-ekwu na ọ dị oge Google ka na-ejighị gị kpọrọ ihe, nke na-abụkarị ihe dị ka ọnwa isii. Na agbanyeghị ole ị rụgoro ọrụ pụrụ iche gara aga, ọ ga-efu gị ịpụta na peeji mbụ nke igwe nchọta ọnwa ole na ole. Ọ bụ ihe a maara dị ka "Sandbox" nke Google.
Akwụ ụgwọ - Gwọ ahụ bụ ọdịiche ọzọ dị n'etiti SEO na SEM. A na-akwụ SEM ụgwọ. Anyị na-ekpebi mmefu ego iji tinye ego, a na-ebo anyị ebubo maka pịa ọ bụla emere na mgbasa ozi anyị. Ọ bụ ya mere akpọkwara mkpọsa ndị a PPC (kwụọ ụgwọ kwa Pịa). SEO bụ n'efu; ikwesighi ịkwụ onye ọ bụla ụgwọ iji pụta na nsonaazụ. Agbanyeghị, ọnụahịa oge na awa a na-arụ ọrụ na-adịkarị elu karịa nke SEM. Ekwesighi ka edozi ọnọdụ ndị dị na injin ọchụchọ. E nwere ọtụtụ narị njirisi na oke iji banye na akaụntụ maka ibe ịpụta n'ihu ma ọ bụ mgbe ndị ọzọ gasịrị. Rulesfọdụ iwu egwuregwu ahụ ị gharịrị ịma, na ị ga-akpachara anya ịghara ịnwa ịgbanwe ka ị ghara ịta ahụhụ. Nke mbụ bụ usoro iji gbanwee algọridim (mgbe ụfọdụ ọbụna na-adịghị mma), na nke abụọ bụ ịrụ ọrụ iji bilie ọnọdụ, mana n'ime iwu nke egwuregwu ahụ.
Ọnọdụ na njin ọchụchọ - Na SEM, na mgbakwunye na ịnwe ọnọdụ mbụ nke nsonaazụ, ị nwekwara ike igosi mgbasa ozi na njedebe nke ibe ahụ: SEM na-ebido mbido na njedebe nke ibe ahụ, SEO na-anọkarị n'akụkụ etiti nke ọchụchọ ahụ. Nsonaazụ.
Isiokwu - Usoro abuo a dabere na njikarịcha nke isiokwu mana enwere nnukwu ihe dị iche na mgbado anya mgbe anyị na-eme atụmatụ maka otu ma ọ bụ nke ọzọ. Agbanyeghị na enwere ngwaọrụ dị iche iche maka SEO na SEM, a na-ejikarị onye na-eme atụmatụ isiokwu nke Google eme ihe ugboro abụọ iji bido atụmatụ ya. Mgbe anyị na-achọ isiokwu, akụrụngwa na-eweghachi okwu niile metụtara isiokwu a họọrọ, yana olu nke nyocha kwa ọnwa maka nke ọ bụla, yana nsogbu maka isiokwu ọ bụla ma ọ bụ ọkwa ike.
Na nke a bụ ebe oke ọdịiche dị n'etiti SEO na SEM dị:
Mgbe anyị nọ na SEM, anyị na-atụfu mkpụrụokwu ndị ahụ nwere obere ọnụọgụ ọchụchọ, SEO nwere ike ịdị na-atọ ụtọ n'ihi na asọmpi ahụ dị obere ma ga-eme ka usoro nhazi dị na ntanetị. Ọzọkwa, na SEM, anyị na-elele ọnụ ahịa kwa pịa nke okwu ọ bụla (ọ na-egosi, mana ọ na-enye anyị echiche nke asọmpi dị ugbu a n'etiti ndị mgbasa ozi), na SEO anyị na-elele akụkụ ndị ọzọ dị ka ikike nke ibe .
Tags: nyocha ọchụchọakwụ ụgwọ ọchụchọahịa search enginesearch engine njikarịchaChọọ Marketingebe asem na seoAseo na nke